Ukuqondisa Amashayeli wephrinta e-Power Bank China Manufacturer
Incazelo:Iqondisa ku-Cartridge ye-Power Bank iphrinta,Ukuqondisa ku-Cartridges yephrinta ye-Power Bank,Ukuqondisa ekhadini lephrinta le-Power Bank
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Power Bank > Ukuqondisa Amashayeli wephrinta e-Power Bank
1.Umshini we- A3 UV we-UV uthola uhlelo lokulawula ikhompiyutha ehlukahlukene. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet.
2. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge-landscape, uhlamvu, umdwebo wendabuko waseChina, imidwebo yamafutha, i-calligraphy kanye nomdwebo, ukudweba kweyinki, i-gouache, izimbali, izinyoni, i-cartoon yonke engayinyathelisa kunoma yikuphi impahla ngokuqondile;
3. Ukusebenza kulula, okulula futhi okusheshayo, ukupomfa kuyomisa. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo, kungabonisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi.
Izici eziwusizo zekhasimende lethu eliqondile le-Power Bank Printer Cartridge RF-A3UV:
Intelligent: 1. Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Cartridges ukuphrinta ndawonye (umhlophe + umbala / umbala + umhlophe);
3. Ukuqondisa ekhadini lephrinta lePower Bank I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iqondisa ku-Cartridge ye-Power Bank iphrinta Ukuqondisa ku-Cartridges yephrinta ye-Power Bank Ukuqondisa ekhadini lephrinta le-Power Bank I-Cartridge ye-Power Bank Printer Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta Qld Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta i-Xp Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta i-Jam Eqondisa ku-Power Bank iphrinta yegatsha